Abenzi base China i AY Series Centrifugal neeMpompo zeoyile kunye nabathengisi KAIQUAN
Uthotho lweempompo zechungechunge lwe-AY ziyilelwe kwaye zilungiselelwe ngokusekwe kwiimpompo zohlobo oludala lwe-Y. Luhlobo olutsha lwemveliso ukuhlangabezana nesicelo sokwakha sanamhlanje. Inokusebenza okuphezulu kwaye yimpompo yolondolozo lwamandla.
Uthotho lweempompo zechungechunge lwe-AY ziyilelwe kwaye zilungiselelwe ngokusekwe kwiimpompo zohlobo oludala lwe-Y. Luhlobo olutsha yemveliso ukuhlangabezana nesicelo sokwakha sanamhlanje. Inokusebenza okuphezulu kwaye yimpompo yolondolozo lwamandla. Kwimeko yokungachaphazeli unaniselwano ngemveliso, siyakwandisa ezinye izinto ezingenangqondo zokwenza ngcono.
1. Ukuzalisa umzimba, sithatha indawo ye-35,50,60 yokuthwala imizimba yempompo yohlobo oludala nge-45,55,70 ethweleyo imizimba enokuthenjwa okuphezulu.
2. Sebenzisa ubuchule obuphezulu beemodeli zamanzi kwiindawo zokuhamba ezihamba ngesanti kubunzulu baphantsi kunye neemodeli ezikhoyo ngoku Ukusebenza kwe-5 ~ 8% ephezulu kuneemodeli ezindala.
3. Uhlobo lwe-AY lweepompo zeoyile uhlobo lwesakhiwo, ubungakanani bokufakwa, ukugubungela ukusebenza, udidi lwezinto ayitshintshwa. Kukulungele ukuhlaziya iimpompo ezindala.
4. Izinto eziqhelekileyo eziqhelekileyo zisetyenziselwa uthotho lwemveliso.
5. Izinto eziphathekayo zisetyenziswe ngokuchanekileyo. Kwaye ikakhulu class2 ~ 3 izinto. Sonyusa iintlobo ezimbini ze izinto eziphathekayo, isinyithi yentsimbi kunye nentsimbi yentsimbi, ukwenzela izinto ezinje ngokuthwala umzimba ukuze kube nempompo ifanele ngakumbi indawo ebandayo okanye iimeko zomsebenzi njengaphandle, elwandle njalo njalo.
6. Zintathu iindidi zokuthwala iindlela zokupholisa, ukupholisa umoya obandayo, ukupholisa ifeni yomoya kunye namanzi ukupholisa. Iqondo lobushushu lomsebenzi lahlukile ngokweemeko zomsebenzi ezahlukeneyo. Ifeni yomoya ifom yokupholisa ilungele ngokukodwa loo ndawo kukungabikho kwamanzi acocekileyo.
7. Iimpompo zohlobo lwe-AY zinomgangatho ongcono emva kokuhlaziya kunye nokwenza ezinye izinto ngokwe izimvo zabathengi.
Kukho iindidi ezingama-27 zeempompo zeoyile ze-AY kunye nokugubungela ukusebenza:
Intloko: H = 20-670m
Imeko yomsebenzi: t = -45 ~ = 420 (impompo emininzi -20 ~ = 200)
Ubushushu bomsebenzi (t): -20 ~ + 420
Impompo ye-AY isetyenziselwa ukucokisa i-petroleum, ishishini le-petrochemical, ishishini lamachiza kunye nezinye Izicelo zokuhambisa ipetroleum ngaphandle kwamasuntswana aqinileyo, i-LQG kunye nolunye uhlobo. Kufanelekile ngakumbi ukuhambisa izinto ezinokutsha, ezinokudubula okanye ezinobungozi kwiqondo lobushushu eliphezulu kunye noxinzelelo oluphezulu lolwelo.
Egqithileyo KGD / KGDS Series nkqo Pipe Pump
Okulandelayo: I-KD / KTD Series Multistage Centrifugal Pump
Impompo yeMultistage Centrifugal Pump
Ipompo yokuMunca iMultistage kabini yokuFunxa
Stainless Multistage Centrifugal Pump
Nkqo Inline Multistage Centrifugal Pump
Nkqo Multistage Centrifugal Pump
KGD / KGDS Series nkqo Pipe Pump
Inkqubo yeCandelo leKhemikhali yoShishino lweKhemikhali
I-KDA Uthotho lweNkqubo yePetrochemical Pump
KQA Series Multistage Pump kunye yezihlunu kuchitheka